တွေးမိတွေးရာ Archives - Page2of6- IT-KOKO
အလုပ်လုပ်တာ ၂နှစ်ကျော် ၃နှစ်လောက် ရှိလာတော့ မသိမသာ နဲ့ မကောင်းတဲ့ အကျင့်တစ်ခု ရလာတယ်?။ အလုပ်ကို သေသေချာချာ သေသေသပ်သပ် မလုပ်တော့်ဘူး။ ဖြစ်သလိုနဲ့ ပြီးရင် ပြီးရော လုပ်တတ်လာတယ်။ အမှားများလာသလို လိုရင်လိုသလို ဖောပြီး ရွှီးတတ်လာတယ်။ ကိုယ်က ကျွမ်းကျင်တဲ့ အပိုင်းဆို ပိုပြီးတော့ ဖောတတ်လာတယ်။ အချိန်မလေးစားတော့သလို အလုပ်ကို ချက်ချင်းမလုပ်တော့ဘူး။ အချိန်ဆွဲပြီး လုပ်တတ်လာတယ်။ အရင်တုန်းကဆို အလုပ်တစ်ခု ရလာပြီဆို ချက်ချင်း လုပ်တယ်၊ မပြီးမချင်း မပြန်ဘဲလုပ်တယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမယ်၊ ဘယ်တော့မှ လာယူ၊ ပြီးရင်ပို့လိုက်မယ်၊ စသည်ဖြင့် အချိန်ဆွဲတတ်လာတယ်။ ကောင်းတာလား ဆိုးတာလားတော့ မသိ၊ ကိုယ်ပြောင်းလဲလာတာတော့ သိတယ်။ အလုပ်လုပ်တာ မြန်လာပေမယ့် အလုပ်မပြီးသလိုဖြစ်နေတယ်။ အလုပ်တွေကို ပြီးအောင်မလုပ်ဘဲ …
စာမရေး စာမဖတ်တာ တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ။ အလုပ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေ လောက်ဘဲ လိုက်လေ့လာဖြစ်တယ်။ အလုပ်မှာတော့ အပြောင်းအလဲ တော်တော်များသလို ကျွန်တော့ တာဝန်ယူရတဲ့ အပိုင်းတွေပိုများလာတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် အသစ်တွေများလာတော့ သူတိုနဲ့ အစဉ်ပြေအောင် သည်းခံပြီးနေရတာပေါ့။ အလုပ်ထွက်တဲ့သူတွေများလာတော့ ကျွန်တော်က အလိုလို စီနီယာကြီးဖြစ်သွားရော၊ ပြီးတော့ ထွက်မယ်လုပ်တဲ့ကျွန်တော့ကို သူဌေးက နည်းမျိုးစုံနဲ့ Psycho ထည့်တာပေါ့။ နောက်ဆုံးတော့ မပြောင်းတော့ပါဘူးဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းဆက်တတ်ချင်တာ တစ်ခုကြောင့်လဲ ပါတာပေါ့။ ဒီနှစ် ကျောင်းဆက်တတ်ဖြစ်တယ်။ မြန်မြန်နဲ့ ပြီးတဲ့ကျောင်း တွေရှာကြည့်တော့ government uni ထက် private uni ကို တတ်ဖို့ရွေးဖြစ်သွားတယ်။ လောလောဆယ်တော့ PSB က University of Newcastle မှာ တတ်ဖို့ …
Happy Myanmar New Year 2014
By အိုင်တီကိုကို on Sunday, April 13, 2014
လတန်ခူး ပေမို့ အလှထူး ပါဘိ မြမြဖူးရယ်တဲ့ ခိုင်ရွှေဝါ။ တကယ်တမ်း သာဖြင့် ဘယ်ပန်းသော် စံမတူဘု နန္ဒမူ ဖလ််ဂူ ထိပ်မှာလ ပစ္စေကာ ချွေးတော်သိပ်ရတယ် အေးရိပ် ဆာယာ။ တနှစ်တွင် သည်တလသာပ တလတွင် တရက်ထဲ ခက်ခဲတဲ့ ရက်ဗုဒ္ဓါ ပွင့်ရှာကြ စုံမြိုင်တွင်း။ မြူမင်း လွင်ထန် ကြူသင်းတာ ချိန်ယံ မတော့ ရွှေဝတ်ဆံ ငုံတံ ညှောက်ကယ်နှင့် ခါသင်္ကြန် ဂိမှာန် ရောက်ပြန်တော့ သိရ်သရေ ထိန်ဝေလို့ တောက်တဲ့ပြင် လမ်းတလျှောက် သင်းတာမို့ ဆန်းသလောက် မလင်းနိုင်ဘု ပန်းပိတောက်မင်း … ။ … ။ ဦးကြော့
အပြော နဲ့ အလုပ်
By အိုင်တီကိုကို on Friday, March 14, 2014
အပြောနဲ့ အလုပ် အတတ်နိုင်ဆုံး တစ်ထပ်တည်း ကျအောင်လုပ်… မလုပ်နိုင်ရင် မပြောနဲ့။ ပြောသလိုလုပ်… ကိုယ်လုပ်ကိုယ်ခံ။ နောက်မှဆိုတဲ့ စကားလုံး လုပ်မယ်အလုပ်မှာ လာမရောနဲ့… ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်။ ပိန်းတိန်းတိန်းတော့ ရှောင်။
Cash Outflow for 2013
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, December 21, 2013
၂၀၁၃ မှာ ဝယ်ခဲ့တဲ့ စာရင်း… Samsung Galaxy Ace2Google Chromecast Google Nexus7(2013) & Cover HP Chromebook 14 Moto G Phone & Cover Slim Port (HDMI Adapter) Code: The Hidden Language of Computer Hardware and Software by Charles Petzold (Book) Give and Take: A Revolutionary Approach to Success by Adam M. Grant Ph.D. (Book) Big Data …
Watch out MYANMAR in future!
By အိုင်တီကိုကို on Saturday, December 14, 2013
Sleeping giant just awakes now as golden giant. Sleeping giant awakes!!! Watch out MYANMAR in future! အဲ့ဒီ စားသားလေးက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို အနည်းငယ် အားတတ်စေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လောလောလတ်လတ် လုပ်နေတဲ့ SEA GAME ဖွင့်ပွဲကို ကြည့်ပြီးသူတိုင်း အားကျ ကျေနပ်ကြတယ်ဆိုတာ အခုတလော fb မှာ ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသူ/သားတွေသာမက နိုင်ငံတကာမှာပါ လူသိများပြီး SEA GAME သာမက မြန်မာနိုင်ငံကိုပါ လူသိများလာပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ရင်ထဲမှာလည်း ပျော်ပါတယ်။ အကောင်းပြောခံရသလို မလိုအပ်ဘဲ $$ အများကြီး သုံးတယ်ဆိုပြီး ထောက်ပြတဲ့ သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အများကြီးမသုံးဘဲ …
မြန်မာလို ကောင်းကောင်း ရေးလို့ရပြီ။
By အိုင်တီကိုကို on Friday, December 6, 2013
အခုပိုစ့်ကိုကျွန်တော် Nexus7ကနေတင်လိုက်တာပါ။ Android မှာ Unicode keyboard ရှိပြီးသားပါ၊အရင်တုန်းကဖောင့်မရတာနဲ့မသုံးရတာ၊ အခုတော့ကောင်းကောင်းရေးလို့ရသွားပြီ။ ရေးစမရှိသေးတော့နည်းနည်းတော့ ရေးရခက်တယ်၊ နောက်တော့ အကျင့်ပါသွားမှာပါ။ကီဘုတ် ကောင်ကောင်းလေး ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်… အရင်ကလို လေးထောင့်တုန်းတွေ မမြင်ရတာကိုဘဲ ကျေးဇူးတင်နေပြီ။ အရင်တုန်းက Windows မှာမြန်မာလို ပါရင်ပြောင်းမယ်၊ ဖုန်းမှာမြင်ရရင် ပြောင်းမယ်ဆိုသူများ…. ပြောင်းပြီးပြီလားဗျာ.?? ဘာလိုလိုနဲ့ မြန်မာကျူတိုရီရယ်ဆိုဒ် မဝင်တာတော်တော်ကြာသွားပြီ၊ ဇော်ဂျီပြောင်းပြီးကတည်းက ဆိုပါတော့။ ဟိုတခါက ဖိုရမ်ဖြစ်သွားတုန်းကတော့ တခါဝင်ဖြစ်တယ်… အရင်လို မဟုတ်တော့ မကြိုက်တော့ဘူး…